कोरोना फैलन नदिन सरकार कहाँ चुक्यो | Indrenionline.com
कोरोना फैलन नदिन सरकार कहाँ चुक्यो
विश्वव्यापी महामारीकोरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड – १९ का कारण मंगलवार बिहान १२ बजेसम्म विश्वभर हालसम्म ७४ हजार ७ सय ८२ जनाले ज्याउन गुमाइसकेका छन् । हालसम्म कोरोनाबाट १३ लाख ४७ हजार ६ सय २४ जना संक्रमित भएका छन् ।
चीनको बुहानबाट फैलिएको भनिएको कोभिड– १९ ले अहिले बिश्वका सबैजसो मुलुकमा प्रवेश पाइसकेको छ । केही हप्ता पहिलेसम्म चीन तथा युरोप तथा अमेरिकन मुलुकहरुमा तीब्ररुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारी बिस्तारै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा फैलन शुरु भएको छ ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दाबढी जनसंख्या भएको मुलुक भारतमा पछिल्लो पटक सम्ममा गरेर कुल ४ हजार ७ सय ७८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । भारतमा हालसम्म कोरोनका कारण एक सय ३६ जनाले ज्यान गुमाएकाछन् ।
नेपालमा हालसम्म ९ जना संक्रमित भएकोमा एकजनाले निको भएर स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन् । कोरोनाले नेपालमा महामारीकैरुपमा ग्रहण नगरे पनि हामीलाई खतराको घण्टी बनाएको छ । यो आयातित रोग भएकाले विदेशबाट आउने केही व्यक्तिहरुमा देखिनुलाई पहिलो चरण मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा विदेशबाट आएका एकजना व्यक्तिबाट यहीँ रहेका अर्का व्यक्तिमा सरेको पुष्टि भइसकेकाले हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं ।
सरकारले कोरोनालाई महामारीकोरुपमा फैलन नदिनका लागि विभिन्न कदमहरु चालेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि करिब दुई साता देखि देश लकडाउनमै छ ।
आगामी एक साताकालागि लकडाउन थप्ने निर्णय भएको छ । परिस्थितिको आँकलन गरेर अँझै कैयौं दिन लकडाउन थप्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
स्वभाविकरुपमा कुनै काम गर्दा आलोचना र समर्थनहरु आउँछन् । आलोचन र समर्थनलाई ग्रहण गरेर उचित पहलकदमी लिनु सरकारको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
सरकारले लकडाउन गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, लकडाउनपछि चालिनुपर्ने त्यस्ता धेरै कदमहरु छन् । त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । लकडाउन मात्रै कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त उपाय होइन । हामीले तीब्ररुपमा परिक्षण गरेर संक्रमतिको पहिचान र उपचार गरिनुपर्दथ्यो ।
संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति तथा परिवारलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्दथ्यो । तर, सरकार यस्ता कदमहरु चाल्न निकै ढिलासुस्ती र अपरिपक्व देखिएको छ । बरु कोरोना परिक्षण गर्ने किट र सुरक्षा सामाग्री खरिद प्रकरणमै विवादित बनेको छ ।
चीनिया कम्पनीसँग गरिएको सामाग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्नुले पनि गुणस्तरहिन सामान आएको र त्यहाँ अनियमिता भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वभाविकरुपमा प्रतिपक्ष र नागरिकस्तरबाट बिरोधका स्वरहरु आउछन् । तर, ती स्वरहरुलाई संवोधन गर्नु त कहाँ हो कहाँ सरकारका मन्त्री तथा उनका आसेपासेहरु बचाउमै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यदि अनियमितता भएकै छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिलगायतका अन्य निकायहरुले अवष्य छानविन गर्ने नै छन् ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै पक्ष एकढिक्का भएर कोरोना बिरुद्धको संघर्षमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
अहिलेका लागि हाम्रो मुख्य चुनौति भनेको छिमेकी मुलुक भारतबाट नै हो । किनकी हाम्रो देशको उत्तरी सिमा बाँहेक सबै स्थानमा भारतसँग खुला सिमा जोडिएको छ । सीमा सुरक्षा निकायहरुले कडाइ गरेपनि त्यस्ता कैयौं स्थानबाट धमाधम मान्छेहरु आइरहेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
भारतीय पक्षबाट समेत नेपाल आउन चाहनेहरुलाई विभिन्न स्थानबाट सीमाक्षेत्रसम्म ल्याउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
उनीहरुलाई अनिवार्यरुपमा सरकारी निगरानिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसाल्नुपर्छ । एकातर्फ सीमानाका बन्द गर्ने अर्कोतर्फ अवैध ढंगबाट लुकिछिपि आउनेक्रम बढ्दा झन् बढी संक्रमण फैलने खतरा हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बरु हामीले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा ठूलाठूला क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
लकडाउनकै बीचमा पनि पैदलयात्रा मार्फत धेरै मान्छेहरु भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन् । उनीहरुले सबै गाउँमा जोखिन बढाइरहेका छन् । यदी उनीहरुले साच्चिकै संक्रमण बोकेर ल्याएका रहेछन् भने हामीले इटाली भन्दाबढी क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ ।
विश्वमै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा मानिएको इटालीमा त कस्तो हालत छ हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य सेवा भएको मुलुकको हविगत के होला ?
अब सबै स्थानीयतहहरुले विदेशबाट आएकाहरुलाई तत्काल खोजेर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ । सरकारले सबै प्रदेशबाट स्वाब परिक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ । यो अत्यन्त सराहनीय पक्ष हो । तर, परिक्षणको दर हामीले ह्वात्तै बढाउनुपर्छ ।
सबै प्रदेशमा कोरोना उपचार अस्पताल स्थापना गरिएको छ । तर, ती अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिनेमा भने विश्वास गर्न सकिदैन । अहिले पनि कोरोना अस्पतालमा भिडियो एक्सरेको व्यवस्था छैन । जटिल अवस्थामा रहेका बिरामीहरुकालागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको छैन ।
तत्काल कोरोना अस्पताललाई सुविधासम्पन्न गराइनुपर्छ । उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीको अभावमा काम गर्न समस्या परेको छ । उनीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारले सुरक्षामा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने छ ।
हाम्रो आर्थिक सिमितता, सरकारको कार्यशैलि र पूर्व तयारीको अभावमा धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौतिका वावजुत पनि सम्भावना खोज्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले सरकारले उठाएका कदमहरुलाई साथ दिनै पर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै कोरोना संक्रमणबाट बच्चे अचुक उपाए हो । कोरोनाको औषधि बनिनसकेको अवस्थामा संक्रमण हुन नदिनु नै यसको उपचार हो । जनस्तरबाट विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पहल गर्नु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु, लक्षण देखिएकाहरुले तत्काल सरकारलाई खबर गर्नु नै अहिलको अवस्थामा हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो ।•
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार १३:३०
Previous: बैशाख १ गतेबाट दाङमै कोरोनाको परिक्षण हुने
Next: कोरोना रोक्न यसरी मात्र संभव छ !
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार २२:०४
ढाक्रे हटारुका ती दिनहरू…
४ भाद्र २०७७, बिहीबार १०:२४